Nipsey Hussle ayaa xaqiijiyay in carruurtu ay diyaar u yihiin nolosha, sida lagu sheegay warbixinta - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE » Nipsey Hussle s'est assuré que les enfants étaient prêts pour la vie, selon un rapport – people
Nipsey Hussle ayaa hubiyay in carruurtu ay diyaar u yihiin nolol, sida laga soo xigtay warbixinta - dadka
Qoyska Nipley Hussle ayaa si qarsoodi ah u xiray dhaqdhaqaaqa dhaqaale, oo ay ku jiraan kuwa ay bilaabeen jimicsi, si loo xaqiijiyo amniga maaliyadeed ee carruurtooda. dhimashada Warbixinnada TMZ.
qoyska waxay aaminsan tahay in ururinta muhiim ma aha maxaa yeelay, heesaa iyo ganacsadaha Los Angeles ayaa abuuray dhowr lacagta ammaanada si loo hubiyo in laba carruur ah, Emami iyo Kross Asghedom marnaba u leeyihiin in ay ku tiirsan yihiin kuwa kale lacag, ayaa ku daray TMZ. Hussle, oo magaciisa dhabta ah Ermias Asghedom, wuxuu ahaa ganacsade ah oo dhakhso ah, kuwaas oo ay leedahay oo dhan sayid of cajalado uu, sidoo kale ay dukaanka tafaariiqda Marathon Dharka.
Hussle, 33, ayaa lagu toogtay dukaanka dharka ee koonfurta Los Angeles. Maarso 31, Eric Holder, oo loo yaqaan '29-da', ayaa lagu eedeeyay dilka. Bilayska ayaa sheegay in toogashooyinka laga saaray nooca shakhsi ahaaneed .
Waxaa la ogyahay in Hussle la go'aamiyay. bulshadiisa iyo qoyskiisa. Emani, oo da'deedu tahay 7, waxay ku dhalatay xidhiidhkeeda ay la leedahay saaxiibteeda hore, Tanisha Asghedom, waxaa daabacay Heavy.com. Emani wuxuu riwaayad casri ah kula socday aabaheed markii uu ku guuleystay 2019 Grammy Awards.
Hussle iyo aktarada Lauren London, oo saaxiibtiis shan sano jir ah, waxay ahaayeen waalidiinta Kross, oo ahaa 2 sano.
Ka dib dhimashadii Hussle, boggag badan oo dad badan ayaa la daabacay. . Mid ka mid ah boggaan waxaa abuuray Reggie Bush, oo ah hawlgab NFL oo hawlgab ah, kaas oo loogu talagalay inuu kor u qaado USD 100 000 ee caruurta, ayaa sheegay in TMZ. isaga qudhiisuse wuxuu ku bixisay dollars 10 000 on goobta, laakiin sidoo kale lagu dhaleeceeyey online isku dayay in ay ka faa'idaystaan ​​musiibo ay ku helaan "miisaan" nafsaddiisa u bixinayo, sidaana waxa sheegay The Source.
Warar been ah ayaa sheegaya in Jay-Z uu abuuray hanti ammaan oo loogu talagalay carruurta Husser, sida ay sheegtay The Source.
Qoyska Hussle waxay rabaan inay dadku ogaadaan in ay ku faraxsan yihiin qulqulka jacaylka iyo taageerada, laakiin waxay ku adkaysanayaan in carruurtiisu aysan ka walwalin lacag, ayuu raaciyay TMZ.
Emani iyo Kros ayaa lagu sharfay xaflad lagu xusayay xafladdii xusbiga ee Staples ee magaalada Los Angeles ayaa sheegay in xayawaanka. Qaar ka mid ah dadka 21 000 waxay ka soo qayb galeen oo ay arkeen caruur ay ku soo biireen walaashii London iyo Hussle walaasheed Samantha Smith. Kameron Carter, oo ahaa wiilkii London ee la socday Lil Wayne, ayaa sidoo kale ku biiray. Ka dib Carter wuxuu hadal u jeediyay oo wuxuu ku booriyay dadka in ay qeyliyaan "ixtiraamka!" Ilaa uu aabihiis daaha ka ahaa, Kross ayaa ku dhegay makarafoonka.
#NipseyHussle Carruurta pic.twitter.com / PEkVZIT9wh
- BallerAlert (@balleralert) 11 April 2019
Notre-Dame de Paris: Waxyeellada xilligaas waa mid aad u qiimo badan
Soo koobitaanka hadalka Emmanuel Macron